क्रिश्चियन धर्म प्रचारक अाइएनजिअाेले मन्त्रि देखि प्रधानमन्त्रीलाई आशिर्वाद दिने भएपछी बिभिन्न व्यक्तिले यस्तो प्रतिक्रिया दिए «
क्रिश्चियन धर्म प्रचारक अाइएनजिअाेले मन्त्रि देखि प्रधानमन्त्रीलाई आशिर्वाद दिने भएपछी बिभिन्न व्यक्तिले यस्तो प्रतिक्रिया दिए
काठमाडौँ । एउटा विवादास्पद अन्तर्राष्ट्रिय गैर-सरकारी संस्था युनिभर्सल पिस फेडेरेशनद्वारा आयोजित एसिया प्यासिफिक सम्मिट २०१८ को चौतर्फी बिरोध भइरहेको छ । एसिया प्यासिफिक समिटमा युनिफिकेसन चर्चकी प्रमुख हक जा हनले प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनकी पत्नी राधिका शाक्यसहित १५ सय उच्च पदस्थ नेपाली दम्पतीलाई आशीर्वाद दिने तयारी छ । प्राप्त सूचीमा समिटको दोस्रो दिन आइतबार ‘प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मेयर, नेता र शिक्षकका दम्पतीलगायतलाई चर्चकी गुरुआमाले आशीर्वाद दिने’ उल्लेख छ । यो समाचार कान्तिपुरदैनिकले लेखेको छ ।
विश्वभरबाट उच्च तहका ब्यक्तित्वहरु आमन्त्रित यस कार्क्रमले नेपालको परिचयमा थप बल पुगे पनि आयोजक धर्म प्रचारक रहेको कारण जनताबाट आलोचना भइरहेको छ  ।
यहि विषयलाई लिएर बरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक विजय कुमारले निकै घतलाग्दाे व्य‌ंग्य गरेका छन्- ‘चाँदीको जु्त्ताले हानेर-एकनाथले-पशुपतिनाथलाइ-उनकै नगरमा दिउसै तारा देखाउदैछन। हुनत,आफुलाइ बेच्न सडकमा उभिएको समाजलाइ लैजान जस्ले बोली लगाए पनि भो। एनजिओको ‘हरियो टिका’ थाप्न महान राष्ट्रवादी समाजका गन्यमान्य नेताजीहरु बिहानै देखि लाइन बसौँ।’ हेरौ अरु क-कसले के भने :
“यूपीएफ नेपाल च्याप्टरका संस्थापक अध्यक्ष काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति डा. सुरेशराज शर्मा हुन् जसले सन् २००५ देखि २०१३ सम्म संस्थालाई नेतृत्व गरेको महासचिव डाँगीले बताए ।”खै के भनौं अब,आदरणीय सुरेश सर नै हुनुहुँदोरैछ संस्थापक अध्यक्ष।असहज लाग्यो ? https://t.co/i5wB03X5ax
चौतर्फी विरोध र आलोचनापछि उपत्यका हट्यो जोरविजोर प्रणाली
काठमाडौँ, १४ मङ्सिर। काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने सवारीसाधनलाई लगाइएको जोरबिजोर प्रणाली हटाइएको छ ।
महाशाखाका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक बसन्तकुमार पन्तले सम्मेलनका लागि लगाइएको जोरबिजोर प्रणाली हटाइएको जानकारी दिनुभयो । रासस
काठमाडौँ, १४ मङ्सिर । नेपालमा पहिलो पटक हुन लागेको ‘एशिया प्रशान्त शिखर सम्मेलन–२०१८’का लागि सुरक्षा व्यवस्था चुस्त पारिएको छ ।
सबै सुरक्षा निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिएर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त पारिएको गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एकदेव अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले अति–विशिष्ट र विशिष्ठ व्यक्ति सवार हुने क्षेत्रमा सुरक्षा अवस्थालाई समेत ध्यान दिई आवश्यकमात्रामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
“विभिन्न देशका बहालवाला राष्ट्र÷सरकारप्रमुखसहित ४५ देशका पाहुन आउने भएकाले सुरक्षा व्यवस्था भरपर्दाे बनाएका छौँ”, अधिकारीले भन्नुभयो, “परम्परागत सुरक्षा योजनाअनुसार विभिन्न घेरामा सुरक्षाकर्मी परिचालन छन्, सुरक्षा खतरालाई समेत ध्यान दिइएको छ ।”
“मुख्यगरी आवास क्षेत्र, कार्यक्रमस्थल, सडक क्षेत्रको सुरक्षामा थप ध्यान केन्द्रित छ”, अधिकारीले भन्नुभयो । सरकारको आमन्त्रणमा आउनुहुने पाहुनाको हकमा व्यक्तिगत सुरक्षाको व्यवस्थासमेत गरिएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । सुरक्षा योजनामा उपत्यकालाई नै समेटिएको छ ।
प्रहरी प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदीले सूक्ष्म अध्ययन गरी सुरक्षा व्यवस्थामा कुनै कसर बाँकी नराखेको भन्दै मातहतका सुरक्षाकर्मीलाई कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो । गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार सुरक्षाकर्मी थप गरिएकोसमेत उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्तकुमार पन्तले ट्राफिक व्यवस्थापनमा कुनै समस्या नरहेको बताउँदै हरेक क्षेत्रको आवागमन सहज पारिएको बताउनुभयो । अतिविशिष्ट र विशिष्ट पाहुना आउने भएपछि ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि ध्यान दिँदै नेपाल प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने सवारी साधनमा लगाएको जोर विजोर प्रणाली भने सर्वसाधारणको असहजतालाई ध्यान दिँदै आज बिहान ११ः३० बजेदेखि हटाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
गएको भदौमा भएको बिम्स्टेक सम्मेलपछिको यो बृहत् सम्मेलन भएकाले सोहीअनुसार हरेक सुरक्षा अङ्ग परिचालन भएका छन् । सम्मेलनमा छ राष्ट्र÷सरकारप्रमुख तथा उपप्रमुख, पाँच प्रथम महिला, १० पूर्वराष्ट्र प्रमुख, एक उपप्रधानमन्त्री, पाँच सभामुख तथा उपसभामुख गरी ४५ देशका एक हजार ५०० विदेशी विशेष अतिथिको सहभागिता रहने जनाइएको छ ।
सम्मेलनमा भाग लिन टुभालुका राष्ट्रपति लाकोबा ताइया इतालेनी, म्यान्माका स्टेट काउन्सिलर आङ सान सु की र कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेन बिहीबार काठमाडौँ आइपुग्नुभएको छ । फिलिपिन्सका उपराष्ट्रपति लेनी रोब्रेदो बुधबार आउनुभएको थियो । सम्मेलनमा सहभागी हुन शुक्रबार नाउरुका राष्ट्रपति बारोन वाका र समोआका राष्ट्रप्रमुख अफिओगा तुइमालियालिफानो भालेटोआ सुवालौभी द्वितीय आउँदै हुनुहुन्छ ।